Isijoyinwe yinkakha yamalungelo abadlali iPSL | News24
Isijoyinwe yinkakha yamalungelo abadlali iPSL
KUBUKEKA sengathi iPremier Soccer League (PSL) isishintshe ukwenza njenges’thothobala esashiwo abantu ezweni bezincokolela.
Le nhlangano yebhola elikhokhelwayo eMzansi isiqoke inkakha endala nesazi somithetho ephathelene nabadlali, uMnu Michael Murphy.
Lokhu kuqinisekwe uSihlalo wePSL u-Irvin Khoza kanye nesikhulu esiphezulu esibambe njengeChief Executive Officer (CEO) futhi esingumphathi weLamontville Golden Arrows, uMato Madlala.
Le nkalakatha yommeli seyazenzela igama uMzansi wonke ngokuqikelela nokuba ingcweti ekuvikelweni kwamalungelo abadlali nezinkampani ezibhekelene nezemidlalo. UKhoza uthe uyajabula futhi uyaziqhenya ukuthi le nkalakatha yezomthetho isijoyine iligi. UMurphy uzophatha noma uzoba yi handa emnyangweni obhekelene nezomthetho kwiPSL (legal head).
“Umnu Murphy uyaziwa noma ubani ngamagalelo akhe kwezomthetho, ikakhulukazi ekulweleni amalungelo abadlali namakilabhu. Siyajabula ukuthi lolu qweqwe selungomunye wabethu, sibheke ukusebenzisana kahle.
“Ufike kahle impela ngoba umuntu onjengaye uyadingeka, futhi-ke wazi kahle ukuthi kwenzekani kulo mkhakha, ikakhulukazi ngebhola noma ngezemidlalo zaseMzansi. Futhi-ke iqiniso lithi besesidinga umuntu ozothatha le nhlangano ayibeke kwelinye izinga,” kusho uKhoza.
UMadlala yena uthe iPSL iyakuthokozela ukufika kukaMurphy emndenini wePSL ngoba mkhulu phela umsebenzi. Uze wathi kufanele kukhumbuleke ukuthi ngaphandle kokusebenza isikhathi eside ebholeni noma nabadlala namakilabhu kodwa nakwinhlangano yomhlaba yebhola iFifa uyaziwa.
Ekhuluma uMurphy uthe uyambonga usihlalo wePSL ngokumnika ithuba lokuthi asebenzele umndeni wePSL, okuyinhlangano ayihlonipha kakhulu. “Ngithokozile kakhulu ngokujoyina le nhlangano enkulu kanje njengePSL. Ngibonga leli thuba engilinikwe usihlalo wePSL uMnu Khoza. Ngizoludinga usizo lawo wonke umuntu engizosebenza naye kwidiphathimente yami.”